A na-eme Nubia Red Magic 3 na Spain | Gam akporosis
Nubia Red Magic 3 na-ahụ ọtụtụ dị ka ndị kasị mma egwu egwuregwu ama anyị nwere ike ịzụta ugbu a na gam akporo. Ọ ọkọnọ ama ihe karịrị otu ọnwa gara aga, ebumnuche nke ụdị a ka echere na ngwụcha ọnwa Mee. Bọchị a kwadoro site na ụlọ ọrụ n'onwe ya na nke ahụ na-aghọ eziokwu ugbu a. N'ihi na ama ama a abanyelarị na ahịa Spanish. Ekwentị nwere ike inye ọtụtụ agha.
Ihe nlereanya a na-eze ulo oru na Spain, yabụ ndị ọrụ ahụ na-achọ smartphone ama egwuregwu nwere ezigbo ohere iji tụlee nke a Nubia Red Magic 3. Ọ na-abakwa nnukwu uru maka ego.
A malitelarị ama ama a na weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ ahụ, ebe ọ ga-ekwe omume ịzụta ya. Ọ bụ ezie na a na-atụ anya ya site na Mee 31 anyị nwere ike ịzụta nke a Nubia Red Magic 3 na ọtụtụ ụlọ ahịa na Spain. Yabụ ichere iji zụta ya n'ụlọ ahịa anụ ahụ dị mkpụmkpụ n'echiche a.
Dịka anyị kwurula, ọnụahịa bụ otu igodo na ekwentị a nke akara ndị China. N'ihi na ihe nlereanya a na ulo oru na a price nke 479 euro na naanị nchikota nke 8/128 GB. Ere ya na oji. E nwere ụdị nke abụọ nke ekwentị ahụ, nke nwere 12/256 GB, nke ewepụtara na agba uhie yana mbipụta mkpuchi, nke ọnụahịa ya ruru euro 599.
Obi abụọ adịghị ya, ọnụahịa nke Nubia Red Magic 3 a hapụrụ anyị ọ bụ ihe ijuanya na ala maka a smartphone a nso, nke na-abịa na Snapdragon 855 dị ka nhazi ya. Nke a bụ ihe nwere ike inye aka na ahịa nke ngwaọrụ na Spain. Ebe ọ bụ na ọ ga-ewepụta ọtụtụ mmasị na nke a.
Ọ nwere ike ịbụ mmalite nke akara ahụ na-enweta ihe ịga nke ọma na Spain. Ya mere, anyị ga-ahụ otu esi enweta Nubia Red Magic 3 na ụlọ ahịa na Spen mgbe ọ malitere izu a. Akụkụ egwuregwu egwuregwu na-aga n'ihu na-eto, ụdị ọhụrụ dị n'ime ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Nubia Red Magic 3 rutere na Spain
Galaxyfọdụ Galaxy S10 na-ata ahụhụ ọdịda mgbe ha nwesịrị ikpeazụ
Oukitel K12, Xiaomi Redmi Rịba ama 7 na iPhone XS ndụ batrị